KBZPayအသုံးပြုသူအဆင့်(၁.၅)သို့မြှင့်တင်ပြီးဆုငွေများရယူသည့် အစီအစဉ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ - KBZPay
၁။ KBZPay အသုံးပြုသူအဆင့် ၁.၅ သို့မြှင့်တင်ပြီး ဆုငွေများရယူသည့် အစီအစဉ် ကာလသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ လ (၂၆) ရက်နေ့မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၁) ရက်နေ့အထိဖြစ်ပါသည်။
၂။ KBZPay အသုံးပြုသူအဆင့် ၁.၅ သို့မြှင့်တင်ပြီး ဆုငွေများရယူသည့် Campaign ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ KBZPay အသုံးပြုသူ အဆင့် ၁.၅ အဖြစ်မြှင့်တင်ပြီး အဆင့် ၁ အသုံးပြုသူများ နှင့် အသုံးပြုသူအသစ်များသည် KBZPay ရှိပမာဏကန့်သတ်ချက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများပိုမိုကောင်းစွာ အသုံးပြုနိုင် ပြီး ငွေသားဆုများ ရရှိနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
KBZPay အသုံးပြုသူ အဆင့် ၁၊ ၁.၅ နှင့် ၂ တို့သည် KBZPay ၏ ဖွင့်ဆိုချက်များဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် မိမိတို့ အကောင့်၏ အဆင့်ကို KBZPay အပ်ပလီကေးရှင်းအတွင်းရှိ screen ၏ ဘယ်ဘက်ထောင့် ပင်မစာမျက်နှာတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
KBZPay အဆင့် ၁ အကောင့် အသုံးပြုသူ – KBZPay အကောင့်ဖွင့်ရန် ဖုန်းနံပါတ် နှင့် NRC (သို့) ပတ်စပို့ နံပါတ်အသုံးပြုကာ စာရင်းပေးသွင်းထားသူဖြစ်သည်။ အဆင့် ၁ အသုံးပြုသူသည် KBZPay ၏ အချို့သော ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး အဆင့် ၁.၅ (သို့) အဆင့် ၂ အသုံးပြုသူများနှင့် ယှဉ်လျှင် ငွေသွင်းငွေထုတ်နိုင်သည့် ကန့်သတ်ချက် ပမာဏ နည်းပါသည်။
KBZPay အဆင့် ၁.၅ အကောင့် အသုံးပြုသူ – KBZPay အကောင့်ဖွင့်ရန် နာမည်၊ အိုင်ဒီ နှင့် ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်များကို စာရင်းပေးသွင်းသူဖြစ်ပြီး အဆင့် ၁.၅ အသုံးပြုရန် KBZPay မှစီစစ် ခွင့်ပြုချက်ပေးထားသူ ဖြစ်သည်။
KBZPay အဆင့် ၂ အသုံးပြုသူ – KBZPay ဝန်ထမ်းမှ လူချင်းတွေ့ဆုံကာ အဆင့် ၂ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး eKYC အချက်များအားလုံးကို အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်ပြီးသူ ဖြစ်သည်။
၃။ KBZPay အသုံးပြုသူအဆင့် ၁.၅ သို့မြှင့်တင်ပြီး ဆုငွေများရယူသည့် Campaign အစီအစဥ်တွင်အကျုံးဝင်သူများသည် KBZPay အသုံးပြုသူ အဆင့် ၁.၅ အဖြစ် မိမိကိုယ်တိုင် စာရင်းပေးသွင်းလျှင် ၎င်းတို့၏ မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ်ထဲသို့ ဆုငွေ ၅၀၀ ကျပ်စီရရှိမည်ဖြစ်သည်။
၄။ KBZPay အဆင့် ၁ အသုံးပြုသူများ နှင့် KBZPay အား မှတ်ပုံမတင်ထားရသေးသူများ သည် အစီအစဉ်တွင် KBZPay အသုံးပြုသူ အဆင့် ၁.၅ အဖြစ် စာရင်းပေးသွင်းကာ ဆုငွေများကို ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိ အဆင့် ၁.၅ (သို့) အဆင့် ၂ KBZPay အသုံးပြုသူများသည် အစီအစဥ်တွင်ပါဝင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၅။ ဤအစီအစဉ်တွင် ပေးမည့် ဆုငွေ ၅၀၀ ကျပ်သည် ချက်ချင်းရရှိမည့် ဆုငွေများမဟုတ်ပါ။ ဖိတ်ခေါ်ခံရသူ ပေးသွင်းထားသော အချက်အလက်များကို KBZPay မှ စစ်ဆေးပြီးမှသာ ဆုငွေအား မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ်ထဲသို့ ထည့်သွင်းပေးမည် ဖြစ်သည်။ ရုံးဖွင့်ရက် ၃ ရက်အတွင်း KBZPay မှစစ်ဆေးပြီး ဆုငွေထည့်သွင်းမှုများကို ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
၆။ အဆင့် ၁.၅ စာရင်းပေးသွင်းရာတွင် အစီအစဉ်အား လှည့်ဖြား၍ မဟုတ်မမှန်သော အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းသည်ကို KBZPay မှ သံသယရှိပါက ဆုငွေ ၅၀၀ကျပ် အား ထည့်သွင်းပေးခြင်း မပြုလုပ်ခွင့်ရှိသည်။
၇။ အစီအစဉ်ကာလကျော်လွန်ပြီးမှ အဆင့် ၁.၅ သို့ စာရင်းပေးသွင်းသူသည် ဤအစီအစဉ်မှပေးအပ်မည့် ဆုငွေများအတွက် အကျုံးဝင်မည်မဟုတ်ပါ။
၈။ ဤအစီအစဉ်တွင် ဆုငွေများရယူရန် မသမာမှုများ နှင့် အကောင့်အတုပြုလုပ်သည်ဟု သံသယရှိသော KBZPay အသုံးပြုသူများ ၏ အကောင့်အား KBZPay မှ စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်း ခေတ္တပိတ်ထားမည်ဖြစ်သည်။
၉။ ဤအစီအစဉ်ပြုလုပ်သည့် ကာလကျော်လွန်ပြီး အဆင့် ၁.၅ သို့စာရင်းပေးသွင်းမှုများသည် ဆုငွေ ၅၀၀ ကျပ်ရရှိရန် အကျုံးမဝင်ပါ။ KBZPay သည် ဤအစီအစဉ်ကာလအား ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ပြောင်းလဲခွင့်ရှိသည်။
၁၀။ ဤအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သော KBZPay အသုံးပြုသူများသည် မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင် မိုဘိုင်းဖုန်းမှတစ်ဆင့် ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်ခုထဲမှ KBZPay အကောင့်များအား ဝင်ရောက်ပါက ဆုငွေပေးအပ်ခြင်း မပြုလုပ်ပဲ KBZPay မှ စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်း ထိုအကောင့်များအား ခေတ္တပိတ်ထားမည်ဖြစ်သည်။
၁၁။ ချီးမြှင့်သည့်ဆုငွေနှင့်ပက်သတ်၍ KBZ Bank နှင့် KBZPay အသုံးပြုသူအကြား အငြင်းပွားမှု တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်ပါက KBZ Bank ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သာလျှင် အတည်ဖြစ်သည်။
၁၂။ KBZPay အပြာရောင်အပ်ပလီကေးရှင်းအသုံးပြုသူများ (မှတ်ပုံတင်ထားပြီးသောသူ နှင့် မှတ်ပုံမတင်ထားသူများ) သည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အကျိုးဆက်များအတွက် မည်သည့်လျော်ကြေး ကိုမျှ ခံစားပိုင်ခွင့်မရှိပါ။
၁၃။ KBZ ဘဏ်အနေဖြင့် ၅၀၀ ကျပ် ဆုငွေရရှိထားသည့်အကောင့်မှ ၃o ရက်အတွင်း သုံးစွဲမှုမရှိခြင်း (သို့) အကောင့်ထဲသို့ ဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်းမရှိသောအကောင့်များမှ ပေးအပ်ထားသောဆုငွေကို ပြန်လည်နှုတ်ယူခွင့် ရှိသည်။
၁၄။ ဤအစီအစဉ်အား အသုံးပြုသူအသစ်များရရှိရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် သင့်လျော်သော အသုံးပြုပုံအတိုင်း လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဤအစီအစဉ်အား အခြားရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသုံးပြုပါက ကမ္ဘောဇဘဏ်မှ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပါက လိုအပ်သလို အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
၁၅။ KBZ ဘဏ်သည် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို၊ မည်သည့်ကြိုတင်အကြောင်းကြားမှုမျိုးကိုမျှမလုပ်ဘဲ၊ မည်သည့်စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းကိုမဆို ရပ်စဲခွင့် နှင့်/သို့မဟုတ် ဆုကြေးကိုရုပ်သိမ်းခွင့် နှင့်/သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခွင့် နှင့်/သို့မဟုတ် အကျိုးခံစားခွင့် သို့မဟုတ် သွင်ပြင်လက္ခဏာများအား ပြောင်းလဲခွင့် နှင့်/သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲ၊ ဖြည့်စွက်၊ ပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၁၆။ KBZPay ဝန်ထမ်းများသည် campaign တွင်ပါဝင်သူများအားဆက်သွယ်ပြီး OTP, PIN သို့မဟုတ် accountနှင့်ပတ်သက်သည့်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကို မျှတောင်းခံမည်မဟုတ်ပါ။
၁၇။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေများအရ လွှမ်းမိုးမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းဥပဒေများနှင့်အညီအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရမည်။
၁၈။ KBZ ဘဏ်သည် COVID-19 ဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့် ဆောင်ရွက်ထားသည့် မည်သည့် လုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုမဆို အခြေအနေအရပ်ရပ်ပေါ်မူတည်၍ ပြောင်းလဲခွင့်ရှိပါသည်။
1.KBZPay upgrade to Lvl 1.5 Incentive Campaign period is from November 26, 2020 to December 11, 2020.
2.The purpose of KBZPay upgrade to Lvl 1.5 Incentive Campaign is for the new and existing Level 1 customers to upgrade themselves to Lv 1.5to get better limits and usage within KBZPay and to receive cash prizes.
KBZPay levels 1, 1.5 and2are as defined by KBZPay and the current customer level is visible to customers in the menu on the top left side of the screen.
Level 1:acustomer has registered their phone number and NRC/ Passport number in order to set upaKBZPay account. They have limited access to some KBZPay services and have lower transaction limits than Level 1.5 or Level2customers.
Level 1.5:acustomer has gone through the process of submitting their name, ID and contact information in the KBZPay app, and who has been approved asaLevel 1.5 customer.
Level 2:acustomer who has completed the full eKYC process, face to face withamember of KBZPay staff.
3.KBZPay upgrade to Lvl 1.5 Incentive Campaign eligible participants must upgrade themselves to level 1.5 in order to receive the cash price of 500 Kyats into their mobile wallets.
4.Level 1 customers and customers who are not registered on KBZPay are eligible to participate in this campaign. Existing Level 1.5 or Level2customers are not eligible to join this campaign.
5.Reward payments of 500 Ks associated with this campaign will not be instant payments. The reward will be paid after KBZPay has reviewed the Level 1.5 registration form submitted by the participant. Review will be completed and payments made within3working days.
6.If KBZPay suspects someone of gaming the system, or entering fraudulent or incorrect information into the Level 1.5 Customer registration form, KBZPay reserves the right to withhold or take back the 500 Ks incentive reward.
7.Customers who register themselves to Level 1.5 outside of the campaign period are not eligible for the 500 Ks reward.
8.Participants who are suspected of creating fraudulent or fake accounts in an attempt to earn rewards may find their account frozen while KBZPay investigates the fraud.
9.Any Customer registration to Level 1.5 made outside the campaign dates will not be eligible for the 500Ks reward incentive. KBZPay reserves the right to extend or shorten the length of this campaign at any point 10.All KBZPay Customers participating in this campaign must do so from their own mobile device. Attempts to log in to multiple KBZPay accounts fromasingle mobile phone will result in incentives being withheld and accounts being frozen while KBZPay investigates possible fraudulent activity.
11.If any dispute arises between KBZ Bank and KBZPay customers, the decision of KBZ Bank shall be final.
12.KBZPay blue app customers (registered and new non-registered) shall not be entitled to any indemnity asaresult of such unilateral cancellation or on variation of these terms and conditions.
13.KBZ Bank reserves the right to claw back any incentives paid to an account that is not active, for example, is not opened or used to initiateatransaction for 30 days from the date the 500 Ks transfer is made.
14.This campaign is subject to fair usage; if the campaign is used for purposes other than recruiting genuine customers to KBZPay, KBZ Bank will take any action needed to recover losses.
15.KBZ Bank reserves the right, at any time, and without any prior notice, to terminate and/or withdraw the prize and/or cancel and/or vary its benefits or features, and/or vary, add to or delete any of the terms and conditions.
16.KBZPay employees will not contact participants in the campaign to ask for OTP, PIN or account information.
17.These terms and conditions shall be governed in accordance with the laws of the Republic of the Union of Myanmar and shall be interpreted in accordance with these laws.
18.KBZ Bank reserves the right to revise initiatives introduced in response to COVID-19 at any time, as the situation evolves.